COVID-19 : ao Espaina, namorona vola virtoaly ny mponina mba hiatrehana ny krizy · Global Voices teny Malagasy
Elio, fanampiana tonga ara-potoana an'ireo fianakaviana sy mpivarotra madinika tra-pahasahiranana
Nandika (fr) i Damien Digonnet
Voadika ny 09 Marsa 2021 17:24 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, English, polski, عربي, Ελληνικά, Esperanto , 日本語, Español
Sary tao amin'ny Pixabay, nampiasàna lisansa Pixabay.
Raha tsy misy fanamarihana mifanohitra dia mankany amina lahatsoratra amin'ny fiteny espaniôla ny rohy rehetra ato anaty lahatsoratra.
Mba hanohanana ireo varotra madinika sy ireo fianakaviana mahantra, niditra amin'ny fampiasàna vola virtoaly ny faripiadidiana espaniôla iray misy mponina 27.000 [fr]. Ireo mpivarotra ao an-toerana, izay nihena be tokoa ny asa fitadiavany ho fisorohana ny fiparitahan'ilay viriosy, no tena voa mafy indrindra tamin'ilay krizy ara-pahasalamana nateraky ny COVID-19.
Ny olana ara-toekarena misy amin'izao fotoana izao dia sady nisy fiantraikany tamin'ny asa fandraharahana no nandona ireo olontsotra ihany koa, izay niharatsy dia niharatsy tokoa ny toedraharaha iainany. Araka izany dia fianakaviana marobe no nanjary tafiditra anaty tsy fahampiana. Ao Espaina, misy 800.000 amin'izao fotoana izao ireo « mahantra vaovao » vokatr'ilay valanaretina sy ny« fitontonganana manan-tantaran'ny » HKF (Harin-Karena Faobe) 11 %tamin'ny 2020.
Ny taona 2021, nanosoka hevitra mitondra fanavaozana ny kaominina ao Lebrija, anatin'ny faritanin'i Séville (vondrompiarahamonina mizaka tena ao Andalousie any Espaina), mba hanomezana aina vao ny toekarena sy hahafahan'ireo varotra madinika mampifanaraka ny asa varotra ataon'izy ireo amin'ny fitakian'ny « fenitra vaovao ». Ilay vola virtoaly Elio dia isan'ny ohatra iray lafatra amin'izany : ny tanjony dia ny hampifanantona ireo fianakaviana tratry ny fahasahiranana ara-bola sy ireo mpivarotra ao amin'ny kaominina. Aingampanahy avy amin'ny fampiasana ny rafitra karatry ny fahatokisana napetrak'ireo tambajotran-tranombarotra goavana ny fampiasàna io vola virtoaly io, fa kosa ampiharina amin'ireo varotra madinika.
Toy ny Elio, betsaka ireo hetsika santatra ara-teknôlôjia no teraka tao Espaina nandritra ilay valanaretina, mba ho fanampiana ireo orinasa amin'ny ankapobeny. Ohatra, ilay fampiharana La Noria Social Hub (Ivontoerana Sôsialy La Noria, na « kodiarana lehibe »), noforonina tao Málaga ho fanohanana ny famoronana sy ny fampiroborobona ao amin'ilay faritany. Na ¿Tienes sal? (Misy sira ve any aminao ?), fampiharana iray ahafahana mampifandray ireo mpiray vodirindrina ao Madrid, Barselôna ary Valence mba hifanaovana valin-tànana. Io sehatra io dia mandrisika indrindra ny fifampikasohana sy ny firaisankinan'ny mpiray vodirindrina, ary manome vàhana ihany koa ny faharetan'ireo fifanakalozana.
Nandritra ny fihibohana tamin'ny 2020 i Elio no natombok'i David Pérez, lefitra voalohan'ny ben'ny tanàna sady delege misahana ny teknôlôjia vaovao sy ny tariny. Ny tanjony? Ny mba hahafahan'ireo fianakaviana samihafa ao Lebrija, nofantenana arakaraky ny fidirambolany, hividy entana eny amin'ireo mpivarotra madinika ao amin'ny kaominina, mba hanetsehana araka izany ny toekarena ao an-toerana no sady manohana ihany ireo fianakaviana tena tsy manana hosarangotina. Tsy io no hetsika voalohany teknôlôjika nataon'ny kaominina satria ny ankamaroan'ny tolotra omeny dia efa mandeha ara-kajimirindra avokoa amin'ny alàlan'ny fampiasa iray avy ao an-toerana. Ny faran'ny taona 2020 i Elio no natomboka nahodina ary efa fianakaviana 600 sahady no afaka nividy zavatra tamin'ny elios.
Ny elio iray dia misanda toy ny euro iray. Mba hampiasàna io teknôlôjia io, tsy maintsy mitroka ilay fampiharana ireo mponina voafantina tao Lebrija ary mandoa ny antsasaky ny vidin'izay tolotra na vokatra vidiany amin'ny elios ary ny antsasany amin'ny euros. Ny mpampiasa tsirairay dia tsy maintsy misoratra anarana ao amin'ilay fampiharana mba ho afaka hijery izay ambin'antontambola amin'ny elios mbola azony ampiasaina ary ireo mpivarotra manaiky handray ilay vola virtoaly.
Ao Lebrija irery ihany io vola virtoaly io no miasa, mampihena araka izany ny mety hisian'ny fanararaotana. Ho fampandehanana io tetikasa io, nanokanan'ny kaominina ampahan'ny tamin'ny tetibola mahazatra natokana ho amin'ny hetsika hafa, toy ny fetiben'ny kaominina, fanapahankevitra araka izany hanampiana ny vahoakany. 60.000 elios araka izany no nalefa hiparitaka.
Ny fianakaviana tsirairay voafantina dia nandray eo anelanelan'ny 50 sy 200 elios avy amin'ny kaominina ary ny fampiasàna io fomba fandoavambola io dia manankery monja ihany any amin'ireo tranombarotra nisafidy ny handray anjara amin'ilay tetikasa. Vantany vao vita ny fiantsenana na ny tolotra, tsy maintsy mampiseho lazambidy mifanaraka amin'izany any amin'ny kaominina ireo orinasa mba handraisany amin'ny vola euros ny antontam-bola naloa tamin'ny elios.
Hatreto dia 50.000 euros no efa nampiasaina tany anatin'ny sehatry ny varotra tao Lebrija, ka ny antsasany dia nefaina tamin'ny elios. Fahombiazana goavana no azon'ilay fampiharana teny anivon'ny mponina ao amin'io kaominina io. « Nisy sasany tamin'ireo mpivarotra nilaza taminay fa nahafahan-dry zareo nanavotra ny iray volany izany ary ny hafa indray afaka nampitombo avo roa heny ny vola kirakirany », hoy ny tatitry ny fahitalavi-panjakana TVE.
Ny 31 Martsa hoavy izao no hifarana ity tetikasa ity, saingy noho ny fahombiazany, efa dinihan'ny kaominina sahady ny mety ho fanavaozana azy amin'ny hoavy. Ho an'ilay kaominina kelin'i Lebrija, dia voaporofo izao fa miara-dàlana ny firaisankina sy ny teknôlôjia, ary ny fivoahana amin'ny fahasahiranana ara-toekarena dia tsy maintsy handalo amin'ny fivadihana mankany amin'ny nomerika.